Cele News Archives - YATHAZONE
ဂပြနျတျောဝငျမငျးသမီးမာကိုက အခဈြအတှကျနဲ့ ဒီကနေ့ နနျးမှစှေနျ့လိုကျပါပွီ ရငျငွိမျးနှေ ( အောကျတိုဘာ ၂၆ ) အခဈြဆိုတဲ့အရာဟာ တျောတျောထူးဆနျးတဲ့ အရာပါ။ အသကျအရှယျ ရုပျရညျ အဆငျ့အတနျးတှကေို ကြျောဖွတျပွီး သူခဈြခငျြတဲ့ အရာကိုခဈြအောငျ လုပျပဈလိုကျတာခညျြးပါပဲ။ ဒီကနေ့ ဂပြနျတျောဝငျမငျးသမီးမာကို ( ၃၀ နှဈ) က သူမရဲ့ခဈြသူ သာမနျအရပျသား ကိုငျးကိုမူရိုနဲ့ စညျပငျရုံးမှာ လကျထပျလိုကျပါပွီ။ ကိုမူရိုက နယူးယောကျချဥပဒကေုမ်ပဏီတဈခုမှာ အလုပျလုပျတဲ့ ဝနျထမျးတဈယောကျပါ။ တျောဝငျမိသားစုဝငျ တဈဦးဖွဈတဲ့ မာကိုက အရပျသားကိုမူရိုကို လကျထပျလိုကျတဲ့အတှကျကွောငျ့ သူမရဲ့ တျောဝငျနနျးမှကေို စှနျ့လှတျလိုကျရပါတယျ။ ဂပြနျဘုရငျ နာရူဟီတို ရဲ့တူမဖွဈသူ မငျးသမီးမာကိုက အကွီးဆုံးနနျးမှခေံမငျးသမီး ဖွဈပါတယျ။ သူမက နနျးတျောအဆောငျမှူးတှေ …
သင်္ကန်းဝတ်နဲ့တောင် လူစိတ်ဝင်စားမှုများပြီး အာရှနိုင်ငံတွေရဲ့မီဒီယာမှာဖော်ပြခံနေရတဲ့ ပိုင်တံခွန်
သင်္ကန်းဝတ်နဲ့တောင် လူစိတ်ဝင်စားမှုများပြီး အာရှနိုင်ငံတွေရဲ့မီဒီယာမှာဖော်ပြခံနေရတဲ့ ပိုင်တံခွန် မော်ဒယ်မင်းသားချော ပိုင်တံခွန်ကတော့ အာရှတစ်ခွင်မှာ အတော်လေးနာမည်ကြီးလို့နေရပါတယ်။ အရင်ကတည်းက ပိုင်တံခွန်ဟာ မြန်မာပရိသတ်အခိုင်အမာရထားတဲ့အပြင် ထိုင်းနိုင်ငံက ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးနှစ်ခြိုက်မှုကိုလည်း ရထားပြီးသားပါ။ ထိုင်းနိုင်ငံမှာတောင် အနုပညာအလုပ်တွေလုပ်ကိုင်နေပြီး နာမည်ကြီးထိုင်းမင်းသမီးချောလေးနဲ့လည်း အတူအတူကြော်ငြာရိုက်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။ အခုဆိုရင် ထိုင်းနိုင်ငံအပြင် အခြားအာရှနိုင်ငံတွေက ပရိသတ်တွေ၊ နိုင်ငံတကာကပရိသတ်တွေနဲ့ အာရှမီဒီယာတွေကလည်း ပိုင်တံခွန်ကို သတိထားမိလာကြပါပြီ။ ထိုင်းနိုင်ငံအပြင် အခြားအာရှနိုင်ငံတွေက သတိထားမိ လာခဲ့တာက ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက်နေ့က ပိုင်တံခွန်ရဲ့အင်စတာဂရမ်အကောင့်မှာ တင်ထားတဲ့ ပုံတွေကြောင့်လို့ပြောရမှာပါပဲ။ အဲဒီပုံတွေက ပိုင်တံခွန်ရဲ့သင်္ကန်းဝတ် နဲ့ပုံတွေဖြစ်ပြီး လူမှုကွန်ယက်အသုံးပြုသူတွေကြားမှာ နာမည်ကြီးလို့နေပါတယ်။ ပိုင်တံခွန်ဟာ ဆံပင်ရှည်နဲ့ လိုက်ဖက်ပြီး ကြည့်ကောင်းတယ်ဆိုတာ မြန်မာပရိသတ်တွေလည်း အသိပါပဲ။ သူဟာ နှစ်သစ်မှာ …
ထဘီရင်လျားနဲ့ချောင်းထဲမှာ ရေဆင်းကူးပြီး ကောက်ရိုးပုံပေါ်တက်နေတဲ့ ရိုက်ကွင်းနောက်ကွယ်က အခွီပုံရိပ်တွေကို ထုတ်ပြလိုက်တဲ့ ဖြူဖြူထွေး ပရိသတ်တွေရဲ့မေတ္တာကိုခံယူထားတဲ့ ဖြူဖြူထွေးကတော့ အနုပညာအလုပ်တွေကို မနားတမ်းလုပ်ဆောင်နေရတာကြောင့် သူမရဲ့အနုပညာစန်းကလည်းအရမ်းကောင်းပါတယ်နော်။ဖြူဖြူထွေးက ကြော်ငြာတွေမှာလည်း ဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင်တွေကိုခေါ်ပြီး အတူတူရိုက်ကူးကြတာဖြစ်ပါတယ် ။ဖြူဖြူထွေးကတော့ အသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့တင် ပိုက်ဆံတွေအများအပြားရှာနိုင်ပြီး မိဘကိုလည်း တင့်တောင်းတင့်တယ်ထားနိုင်တဲ့ သမီးလိမ္မာလေးဖြစ်ပါတယ်နော်။ ဖြူဖြူထွေးက အလှူအတန်း၊အပေးအကမ်းလည်း အရမ်းရက်ရောတာကြောင့် လိုအပ်သူတွေအတွက်အမြဲတမ်းလိုလိုလှူဒါန်းနေတာကို တွေ့ရပါတယ်နော်။ဖြူဖြူထွေးက သူမရဲ့ရွာက ရွာသူရွာသားတွေကိုလည်း တတ်နိုင်သလောက် ကူညီဖေးမပေးလို့ လူချစ်လူခင်ပေါများနေတာဖြစ်ပါတယ် ။ဖြူဖြူထွေးက လူငယ်ပီပီ ပျော်ပျော်ပါးပါးလည်းနေထိုင်တတ်ပြီး ဟာသတွေလည်းလုပ်တတ်လို့ သူမရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကို ကြည့်လိုက်ရင် အမြဲတမ်းအမောပြေနေရတာဖြစ်ပါတယ်နော်။ ဖြူဖြူထွေးက အခုရက်ပိုင်းမှာဆိုရင် ကြော်ငြာတွေဆက်တိုက်ရိုက်ကူးနေရတာဖြစ်လို့ ရိုက်ကွင်းနောက်ကွယ်က အခွီလေးတွေကိုလည်း သူမရဲ့လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှာ တင်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်။ အခုဆိုရင်လည်း ဖြူဖြူထွေးက ထဘီရင်လျားနဲ့ ချောင်းထဲမှာ ရေဆင်းကူးပြီး …
သားဖြစ်သူကိုမကြည့်ရက်တော့ဘဲနောက်ကွယ်ကအမှန်တရားတွေကို စိတ်မကောင်းစွာပြောပြလာတဲ့မြင့်မြတ်ရဲ့မိခင် ပရိသတ်ကြီးရေ.. သရုပ်ဆောင် မင်းသားမြင့်မြတ်ကတော့ အောင်မြင်မှုတွေနဲ့ ထိပ်တန်းကရပ်တည်နိုင်တဲ့ မင်းသားတစ် ဦးဖြစ်ပေမယ့် ပကာသနတွေကင်းကင်းနဲ့ နေထိုင်တတ်တဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကြောင့် ပရိသတ်တွေ တစ်ခဲနက်ချစ်ခင်အားပေးနေကြ သူပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်..။ မြင့်မြတ်ကတော့ လတ်တလောမှာ မိသားစုအတွင်းရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဖခင်ဖြစ်သူကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့အထင်လွဲမှုတွေကို ခံနေရကာ စိတ်မကောင်းဖြစ်နေ တဲ့အကြောင်းလေးကိုလည်း ပရိသတ်တွေ အားလုံး သိရှိကြမှာပါနော်..။ အဆိုပါကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အားပေးနားလည်ကြတဲ့ ပရိသတ်တွေနဲ့ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေရှိကြသလို အကြောင်းစုံသေချာမသိဘဲ ဝေဖန်အပြစ် တင်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့လည်း ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ သားဖြစ်သူအတွက် မြင့်မြတ်ရဲ့မိခင်က ကိုယ်တိုင်ရှေ့ထွက် ဖြေရှင်းလာပါတယ်နော်..။ တစ်ယောက် တည်းကြိတ်ခံစားကာ ပရိသတ်တွေအထင်လွဲ တာခံရနေရတဲ့ သားဖြစ်သူကို မကြည့်ရက်တော့ဘဲ အမှန်တရားကိုဖြေ ရှင်းပြောပြလာတာဖြစ်ပြီး ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုတော့ …
ရုတ်တရက်လေဖြန်းသွားတဲ့အတွက် မုံရွာဆေးရုံကြီးမှာ ကုသနေရတဲ့ ဟာသ လူရွှင်တော် ဦးမိုးကျော်
ရုတ်တရက်လေဖြန်းသွားတဲ့အတွက် မုံရွာဆေးရုံကြီးမှာ ကုသနေရတဲ့ ဟာသ လူရွှင်တော် ဦးမိုးကျော် ပရိသတ်တွေကို ဟာဒယရွှင်ဆေးတွေ အမြဲ တိုက်ကျွေးခဲ့ပြီး သူတို့ချစ် တဲ့အနုပညာနဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာ ပေးဆပ်ခဲ့ ကြတဲ့ ဆိုနီ မိုးကျော် ဆိုတဲ့ လူရွှင်တော်ကြီး နှစ်ယောက်ကို ပရိသတ်တွေ လည်းသိမှာပါ ။ (၄၁) နှစ်တာ အတွဲညီညီ ပရိသတ်တွေကို ဖျော်ဖြေ ခဲ့ကြတဲ့ ဝါရင့် လူရွှင်တော် ကြီးတွေဖြစ်ပြီး ဦးဆိုနီကတော့ (၂၀၀၉) ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ မှာ ဦးနှောက်သွေးကြောပြတ်ပြီး ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါ တယ် ။ ဒီနေ့ မှာတော့ မုံရွာမြို့ကို ခေတ္တရောက် ရှိနေတဲ့ ဟာသလူ ရွှင်တော်ကြီး ဦးမိုးကျော် ဒီဇင်ဘာလ …
အမိုက်စားကောက်ကြောင်းတွေ ကျစ်လစ်သိပ်သည်းနေကြောင်း ထုတ်ပြလိုက်တဲ့ မအေးသောင်း
အမိုက်စားကောက်ကြောင်းတွေ ကျစ်လစ်သိပ်သည်းနေကြောင်း ထုတ်ပြလိုက်တဲ့ မအေးသောင်း မိမိုက်လွန်းတဲ့ ကောက်ကြောင်းအလှတရားတွေကြောင့် ပုရိသတွေရဲ့ တစ်ခဲနက် ဝန်းရံအားကေးမှုတွေကို ရရှိထား သူကတော့ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချောလေး အေးဝတ်ရည်သောင်းပဲ ဖြစ် ပါတ ယ်။ သူမဟာ အနုပညာလောကမှာ ဆယ်စုနှစ်ကျော်တိုင်အောင် ပရိသတ်တွေလက်ခံအားပေးတဲ့ နိုင်ငံကျော် မင်းသမီးလေးတစ်လက် အဖြစ် ရပ်တည်လျက် ရှိနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မအေးသောင်းဟာ ဘယ်လိုဖက်ရှင်မျိုးကိုပဲ ဝတ်ဝတ် သူမ ရဲ့ ကိုယ်လုံးအလှလေးက ပေါ်လွင်နေတတ်တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလောမှာတော့ အနုပညာလှု ပ်ရှား မှုေ တွမ ရှိသေး တာေ ကြာင့် ပရိသတ်တွေနဲ့ အဆက်သွယ် မပြတ်အောင် Tik Tok လေးတွေ ဆော့ကစားကာ …
“ တရားစွဲခံရမယ်လို့ သတင်းထွက်နေတဲ့အပေါ် ခြိမ့်ကေကို (ခ) ဘနားနားပြောပြီ ”
“ တရားစွဲခံရမယ်လို့ သတင်းထွက်နေတဲ့အပေါ် ခြိမ့်ကေကို (ခ) ဘနားနားပြောပြီ ” ငါအရမ်းခံစားနေရတယ်.. မနေ့ကလည်း တညလုံး မျက်ရည်တွေ ကျပြီး အိပ်မပျော်ဘူး ငါသိပ်ချစ်တဲ့ မိဘနှစ်ပါးနဲ့ ခွဲနေရတာ ရင်တွေ ကြေကွဲမတတ် နာတယ်.. ငါရဲ့စိတ်ထားအမှန်ကို အကောင့်မှာရှိတဲ့ ညီအကိုမောင်နှမများအားလုံး သိကြပါတယ်… ငါကိုလူတွေ ဘယ်လောက် ဆဲနေပါစေ ငါကလူတွေ ပျော်ရွင်အောင် အမြဲတမ်း ဟာသတွေ လုပ်ပြောတတ်တယ်.. ငါမိဘနှစ်ပါးကို ငယ်ငယ်ကတည်းက မရှိ ရှိတဲ့အလုပ် လုပ်ပြီး လုပ်အကိုင် ကျွေးမွေးနေတဲ့ သားလိမ္မာလေး တစ်ယောက်ပါ… ငါမိဘနှစ်ပါးကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ တင့်တောင်တင့်တယ် ထားချင်ခဲ့တာ ငယ်ငယ်ကတည်းက မက်ခဲ့တဲ့ ငါဘဝအိမ်မက် တခုပါ… သတင်းထွက်နေတဲ့အပေါ် ခြိမ့်ကေကို …
ပေါင်မုန့်တွေကို ငါးစာကျွေးလိုက် သူ့ဘာသူစားလိုက်နဲ့လုပ်နေပြီး ကလေးလေးလို ချစ်ဖို့အရမ်းကောင်းနေတဲ့ ဖြူဖြူထွေး . . . . . . . .
ပေါင်မုန့်တွေကို ငါးစာကျွေးလိုက် သူ့ဘာသူစားလိုက်နဲ့လုပ်နေပြီး ကလေးလေးလို ချစ်ဖို့အရမ်းကောင်းနေတဲ့ ဖြူဖြူထွေး . . . . . . . . အောင်မြင်မှုတွေ အခိုင်အမာနဲ့ အားလုံးရဲ့အချစ်တွေကို သိမ်းပိုက်ရရှိထားတဲ့ မင်းသမီးချောလေးကတော့ ဖြူဖြူထွေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်တိုအတွင်းမှာ အောင်မြင်မှုတွေများစွာ ရရှိထားတဲ့ ဖြူဖြူထွေးဟာ . . . . . . . . . . . . . အလှူအတန်းတွေကိုလည်း မကြာခဏပြုလုပ်လေ့ရှိပြီး ရက်ရောတဲ့ သူမရဲ့စိတ်ထားစေတနာလေးတွေကြောင့်လည်း ပရိသတ်တွေကြား အမြဲရေပန်းစားနေတာပါနော် . . . . . . . …
အတိုအပြတ်တွေ မဝတ်ရဲဘူး၊ မရှိ သေးတဲ့ ချစ်သူရဲ့ မျက်နှာကို ကြည့်ရ အုံးမယ်လို့ ပြောပြလာတဲ့ မမဆောင်း အင်တာဗျူးတွေမှာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဖြေဆိုရာကနေ ပရိသတ်ကြားရေပန်းစားခဲ့တဲ့မမ ဆော င်းကတော့ မရှိသေးတဲ့ချစ်သူမျက်နှာကိုကြည့်ရဦးမှာဖြစ်လို့ အတိုအပြတ်တွေအများ ကြီးမလုပ် ထားဘူးလို့ ပေါ်ပြူလာနဲ့အင်တာဗျူးမှာဆိုထားပါတယ်။ “မမဆောင်းကမြန်မာဝတ်စုံဝတ်ရင်လုံလုံခြုံခြုံဝတ်လိုက်တယ် တစ်ဝက်ပေါ်တာတွေ လည်းမ ရှိ ဘူး အောက်ပိုင်းဆိုလည်းအများကြီးမလုပ်ထားဘူး အိမ်ကနေခေါင်းနဲ့ဆင်းရမယ် အစ်ကိုတွေ ကလည်းအများကြီး အကိုတွေမျက်နှာပြန်ကြည့်ရဦးမယ်လေ မရှိသေးတဲ့ချစ်သူမျက်နှာ လည်း ကြည့်ရဦးမယ်လေ အဲဒီ့တော့အများကြီးတွေလျှောက်မလုပ်ပြတော့ဘူး လိုဆိုပါတယ်။ အွန်လိုင်းမှာ Live လွှင့်ပြီးဈေးရောင်းတာ ပေါက်သွားတဲ့အပေါ် မမဆောင်းကတော့“မမ ဆော င်း က ကိုယ့်စိတ်ကူးနဲ့ကိုယ်လုပ်ရတာလေ ရှားစောင်းလက်ပတ်ဆိုပြီးနာမည်ကြီး သွား တာလေ ဒါရည်ရွယ်ချက်မရှိဘူး မမဆောင်းက ဒီစာသားကိုခဏခဏပြောရတာကိုး …
သူကြော်ငြာ ခေါ်ရိုက်မှထမင်းစားရမယ့်လူတွေ မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ စကားကြောင့် စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့ ဖြူဖြူထွေး
သူကြော်ငြာ ခေါ်ရိုက်မှထမင်းစားရမယ့်လူတွေ မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ စကားကြောင့် စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့ ဖြူဖြူထွေး သူကြော်ငြာ ခေါ်ရိုက်မှထမင်းစားရမယ့်လူတွေ မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ စကားကြောင့် စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့ ဖြူဖြူထွေးဟာသ ဗီဒီယိုလေးတွေကတစ်ဆင့် ပရိသတ် ရင်ထဲ နေရာယူလာခဲ့သူကတော့ သရုပ်ဆောင် ဖြူဖြူထွေး ပါပဲနော် သူမရဲ့ အောင်မြင်မှုတွေကတော့ အချိန်အတိုအတွင်းမှာ ဝါရင့် အနုပညာရှင်အချို့တောင် မနာ လိုရလောက်အောင်တဟုန်ထိုး အောင်မြင်ခဲ့တာပါပဲ။အချိန်တိုအတွင်း လူမှုကွန်ယက်မှာ ဖန်အများအပြား ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဘာကြောင့် အချိန်တိုအတွင်းအောင်မြင်စေခဲ့သလဲ ဆိုတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ကတော့ ထူးထူးခြားခြား မဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ပရိသတ်အား လုံးရဲ့ အဖြေကတော့ ဖြူဖြူထွေးဟာရိုးသားလို့ပါ ဆိုတဲ့အချက်ကိုတပြိုင်နက်ဖြေဆိုကြပါတယ်။သူမဟာဆိုရင် အောင်မြင်ခဲ့ပေမယ့် ဘဝင်မမြင့်သလို ၊ ဝါရင့် အနုပညာရှင်တွေကိုလည်းစော်ကားပုတ်ခတ်တာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါ့အပြင် ကိုဗစ်ကာလအကြပ်အတည်းဖြစ်နေတဲ့ ဇာတ်ပို့ဇာတ်ရံတွေ ကိုတောင် သူမရဲ့ …
Total Users : 253559
Total views : 688273